असमयमै कपाल किन फुल्छ ? यस्ता छन् कारणहरु — Imandarmedia.com
असमयमै कपाल किन फुल्छ ? यस्ता छन् कारणहरु
सुन्दर, बाक्लो र मुलायम कालो कपालले तपाईको प्राकृतिक सौन्दर्य र ब्यक्तित्वलाई उजागर गर्दछ । यसका साथै कपालले तपाईको आत्मबिश्वासलाई पनि बढाउछ । हामी जवानीमा पनि बुढापा महशुस गर्दैनौं । तर अचेल प्राय: के देखिन्छ भने उमेर नै नपुगि कमै उमेरका युवाहरुको कपाल फुलिरहेको छ या कपाल झर्ने समस्या (तक्लु) को शिकार भईरहेका छन् ।